Kusunungurwa Kwekanguva muDominican Republic | Bhuku Regore ra2015
Manuel Hierrezuelo akaurayiwa paaibvunzurudzwa nevakuru vakuru vehurumende
Mumakore ose ainge akabhanwa basa redu, Lennart naVirginia Johnson uye Roy naJuanita Brandt vakaramba vachiita basa ravo reumishinari. Lennart anoti: “Ini naRoy Brandt takashevedzwa kuti tibvunzurudzwe nevakuru vakuru vehurumende yaTrujillo. Vakanga vamboshevedza Hama Manuel Hierrezuelo kuti vaonane navo.” Zvinorwadza kuti Manuel akasvika pakuurayiwa paaibvunzurudzwa, asi ainge aramba akaperera kusvika pakupedzisira. Saka chii chakazoitika kuna Lennart naRoy? Lennart anoenderera mberi achiti: “Patakasvika mumwe nemumwe wedu akabvunzurudzwa ari pake ega, zvataitaura zvichirekodhwa. Hapana chimwezve chakazoitika panguva iyoyo, asi papera mwedzi miviri mapepanhau akazivisa kuti hurumende yaTrujillo yainge yava kubvumira Zvapupu zvaJehovha kunamata zvakasununguka.”
Basa redu risati rabhanwa muna 1950, muDominican Republic mainge mava nevaparidzi 261 vaiita basa rekuparidza. Pakabviswa kubhanwa kwacho muna August 1956, mainge mava nevaparidzi 522. Hama dzakafara zvikuru padzakaziva kuti dzainge dzava kukwanisa kuparidza dzakasununguka pashure pemakore matanhatu dziri mumajeri, dzichirambidzwa kuparidza, uye dzichigara dzichiongororwa.
Vanhu vaJehovha vakaita sei pavakangoerekana vasunungurwa kudaro? Vakabva vatotanga kurongazve basa. Vakatsvaka nzvimbo dzekuitira misangano yeungano uye vakagadzira mepu itsva dzendima nemafaira eungano. Hama dzakafara kuti dzainge dzava kukwanisa kukumbira mabhuku uye kuagamuchira. Vakashandisa rusununguko irworwo kuti vashingaire kuparidza. Muna November 1956, pangopera mwedzi mitatu chete, munyika yacho mainge mava nevaparidzi 612.
Vafundisi Vanokuchidzira Moto
Tsamba yaToledano yaitaura zvavaironga kuita kuti mabhuku edu asapinda munyika yacho
Zvisinei, vafundisi veRoma vakabva vatotanga kuronga kuti vasvibise zita reZvapupu. Zvapaiva nechibvumirano chainge chaitwa pakati paTrujillo naPapa, vafundisi vacho vakawedzera kukurudzira hurumende kuti itsakatise Zvapupu. Mupristi weRoma, Oscar Robles Toledano, akatumira tsamba kuMunyori weHurumende, Virgilio Álvarez Pina, achikumbira kuti hurumende imubatsire “kuchenjedza vagari vemuDominican Republic nezvengozi yakakura iri kukonzerwa nekapoka ‘keZvapupu zvaJehovha’.”
Toledano akatsanangura kuti chinangwa chake chaiva “chekuita kuti basa reZvapupu zvaJehovha rekutendeutsa vanhu risabudirire.” Tsamba yaToledano yaitaurawo kuti mabhuku edu haafaniri kubvumirwa munyika yacho, “kunyanya bhuku rinonzi ‘The Truth Shall Make You Free’ uye magazini yeNharireyomurindi.”
Vatungamiriri vezvitendero nevamwe vaishanda muhurumende yaTrujillo vakabatana pakuronga kurwisa Zvapupu. Francisco Prats-Ramírez, purezidhendi weDominican Party, akanyora tsamba kuna Trujillo muna June 1957, achiti: “Ndiri kuronga kuita misangano kuti timise mabasa akaipa eZvapupu zvaJehovha anopikisana nekutsigirwa kwenyika.”
Kuchera uku kwaiva nesimba zvikuru, sezvinotaurwa mubhuku rinonzi Trujillo—Little Caesar of the Caribbean: “[Muna 1957] mapepanhau emuDominican Republic akabudisa mashoko evakuru vakuru veHurumende ekupomera Zvapupu zvaJehovha kuti mabasa azvinoita ‘ndeekupandukira uye akaipa zvikuru.’ Zvinhu zvakabva zvatanga kuipa mupristi weRoma, Mariano Vásquez Sanz, paakataura zvakaipa nezvekapoka kacho panhepfenyuro yeredhiyo yaTrujillo yainzi, La Voz Dominicana [Inzwi reDominican], sekevanhu vaitsigira chiCommunist vaakadana kuti ‘vavengi vakaoma musoro, vakangwarisa, vane mhosva, vatengesi.’ Zvadaro, tsamba yevakuru vakuru vechechi iyo yakasainwa nemabhishopu makuru anoti, Ricardo Pittini naOctavio Antonio Beras yakakurudzira vapristi kuti vachengetedze makwai avo ‘panhema idzi dzakaipa.’”
Zvaiedza kuitwa nevafundisi pamwe chete neHurumende zvakabudirira. Muna July, Paramende yeDominican Republic yakadzika mutemo waibhana basa reZvapupu zvaJehovha. Pasina nguva, hama dzedu dzakatanga kurohwa uye kushungurudzwa nemapurisa. Hama dzinenge 150 dzakasungwa.